Isaia 49:1-13 "1 Mihainoa Ahy, ry nosy, ary atongilano ny sofinareo, ry firenena lavitra; Jehovah efa niantso Ahy hatrany am-bohoka; Hatry ny fony Aho mbola tao an-kibon’ineny no efa nankalazainy ny anarako. 2 Ary nataony tahaka ny sabatra maranitra ny vavako; tao amin’ny aloky ny tànany no nanafenany Ahy. Ary nataony zana-tsipìka voalambolambo tsara Aho; teo amin’ny tranon-jana-tsipìkany no nanafenany Ahy. 3 Ary hoy Izy tamiko: Mpanompoko Hianao, ry Isiraely ô. Izay entiko mampiseho ny voninahitro. 4 Fa hoy kosa Aho: Foana ny nisasarako, zava-poana sy tsinontsinona no nandaniako ny heriko; kanefa ao amin’i Jehovah ny rariny tokony ho Ahy, Ary ny valin’ny asako dia ao amin’Andriamanitro. 5 Ary ankehitriny, hoy Jehovah, Izay namorona Ahy hatrany am-bohoka ho Mpanompony, hampodiana ny Jakoba ho ao aminy indray sy hamoriana ny Isiraely ho ao aminy, (Fa mahazo voninahitra eo imason’i Jehovah Aho, Ary Andriamanitro no heriko), 6 Eny, hoy Izy: Mbola zavatra kely foana, raha tonga Mpanompoko hanandratra ny firenen’i Jakoba Hianao sy hampody ny Isiraely sisa voaro; Fa homeko ho fanazavana ny jentilisa koa Hianao, mba ho famonjeko hatrany amin’ ny faran’ny tany. 7 Izao no lazain’i Jehovah, Mpanavotra ny Isiraely, dia ny Iray Masiny, Amin’Ilay hamavoin’ny olona sy halan’ ny firenena ka tonga mpanompon’ny mpanapaka: Ny mpanjaka hahita ka hitsangana, ary ny mpanapaka koa, ka dia hiankohoka noho ny amin’i Jehovah, Izay mahatoky dia ny Iray Masin’ny Isiraely, izay efa nifidy Anao. 8 Izao no lazain’i Jehovah: Tamin’ny taona fankasitrahana no nihainoako Anao. Ary tamin’ny andro famonjena no namonjeko Anao; Dia hiaro Anao Aho ka hanome Anao ho fanekena ho an’ny olona, mba hanangana ny tany indray sy hampandova ny lova izay efa rava 9 ka hanao amin’ny mpifatotra hoe: Mivoaha, Ary amin’izay ao amin’ny maizina hoe: Misehoa; hihinana eny an-dalana izy, ary na dia any an-tendrombohitra mangadihady aza dia hisy ahitra ho azy ihany; 10 Tsy ho noana na hangetaheta izy, ary tsy hamely azy ny hainandro migaingaina na ny masoandro; fa Izay mamindra fo aminy no hitarika azy, ary any amin’ny loharano miboiboika no hitondrany azy. 11 Hataoko lalana ny tendrombohitro rehetra, ary hasandratra ny lalambeko. 12 Indreo, tonga avy lavitra ireto; ary, indreo, avy any avaratra sy andrefana ireto, ary avy any amin’ny tany Sinima ireto. 13 Mihobia, ry lanitra! Ary mifalia, ry tany! Ka velomy ny hoby, ry tendrombohitra! Fa Jehovah efa nampionona ny olony sy mamindra fo amin’ny olony mahantra."
Mpamonjin’izao tontolo izao (1-7). “Mihainoa Ahy, ry nosy…” Iza no miteny eto? Isaia? Kirosy? Israely? Rehefa zohina amin’ny antsipiriany ny havesa-danjan’ny faminaniana mikasika Azy, dia tsy iza io fa ilay voasoratra ao amin’ny 42:1-7, dia tandindon’i Jesosy Kristy. Andriamanitra no niantso Azy hatrany am-bohoka (1b), nampitao afahany mamita ny iraka (2,5b), ary manome ny tanjona ho tratrarina: ny famonjena (5,6). Tsy famonjena ho an’Israely fotsiny, fa ho an’ny jentilisa koa, dia izao tontolo izao (1a). Isika mpanompon’Andriamanitra, ka manao ny asan’ny Tompo, moa ve tena nirahina ho amin’io asa io sa manira-tena? Efa nihaino an’Andriamanitra tamin’ny alalan’ny vavaka sy ny teniny ve, ka nahare mazava ny antso? I Jesosy tsy manao na inona na inona raha tsy iraka avy amin’ny Ray, mba hisy vokatra tsara (Jaona 5:19-20). Toa izany koa isika amin’ny fanaovana ny asany ary ny tanjona dia hamokatra olom-boavonjy (Jaona 15:16) Mitondra fanavaozana (8-13). Tsy sarotra inoana ve ny fanavaozana ambara eto? Famonjena, fiarovana, fananganana izay efa rava (8), fanafahana, hanina, rano, fitarihana, làlana (9-11), fanangonana (12). I Jerosalema anefa rava, babo any an-tany lavitra ny vahoaka ka miaina ao anaty fahoriana. Ny fihevitr’Andriamanitra tsy mba toy ny antsika, fa “ny fanekeko taminy dia fiainana sy fiadanana” (Malakia 2:5a). Aza adinoina, fa i Jesosy anie maty noho ny fahotantsika mba hananantsika fiainana! Amin’ny alalany Andriamanitra no manavao ny fiainantsika, ny ankohonantsika, ny asantsika, ny momba antsika, ny firenentsika. Fampanantenana: Mandalo zava-tsarotra toa tsy misy vahaolana ianao? Minoa fa hain’ny Tompo ny zavatra rehetra: “Indro havaoziko ny zavatra rehetra” (Apokalipsy 21:5b)